हृदयघातलाइ उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको कियर::देश र जनताप्रति समर्पित
हृदयघातलाइ उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको कियर
मुटुरोगबाट जोगिनका लागि कम उमेरदेखि नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । युवावस्थामा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने प्रमुख कारण धुम्रपान वा सुर्ति सेवन हो । यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक शारीरिक रुपले आफूलाई सक्रिय राख्नुपर्छ । तौल बढ्न नदिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
तपाईको मुटुको अवस्था कस्तो छ, आफै चेक यसरी गर्नुस : डा. ओम मुर्ति अनिल
मुटु रोगहृदय घात
डा बाबुराम भट्टराई अस्पतालमा ! आखिर भएको के हो ? पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गराएका छन। उनले आफ्नो अवस्था ठीकठाक पाइएको पनि बताएका छन् । उनले अस्पतालमा उपचार गरिरहेको तस्बिर सामाजिक...